95W « MMWeather Information BLOG
မုန်တိုင်းဖြစ်လာပြီး ထိုင်ဝမ်ကိုဝင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည့် 95W
By mmweather.ygn, on June 26th, 2012%
ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ဘက် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ် အစပ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 95W သည် ၂၄ နာရီအတွင်း ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်ကာ မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျား၍ ထိုင်ဝမ်ကျွန်းအား ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်ခြေရှိကြောင်း JTWC မှ ထုတ်ပြန်သည့် Tropical Storm Formation Alert တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
လတ်တလောအချိန်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 95W သည် ဖိအား 1007 hPa အထိ ကျဆင်းနေပြီး၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့တော်အနောက်ဘက် မိုင် ၆၇၀ ခန့်တွင် တည်ရှိနေပါသည်။ မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး ထိုင်ဝမ်ကျွန်းသို့ ဦးတည်တိုက်ခတ်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
95W 26 Jun 2012 0600Z Location: 14.4 131.3 Winds: . . . → Read More: မုန်တိုင်းဖြစ်လာပြီး ထိုင်ဝမ်ကိုဝင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည့် 95W
Leaveacomment Uncategorized ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်းမှ မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် အခြေအနေများ
By mmweather.ygn, on May 31st, 2012%
ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်း ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်အစပ်မှာ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 95W ဖြစ်ပေါ်နေပြီး၊ ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်လာနိုင်ခြေအဆင့် HIGH ကို ရောက်ရှိနေပါတယ်။
95W ဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့တော်ရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၆၂၀ ခန့်၊ အနီးဆုံး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေမှ ၂၄၅ မိုင်ခန့်မှာတည်ရှိနေပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နာရီအတွင်းက အနောက်မြောက်ဘက်ကို တစ်နာရီ ၁၀ မိုင်နှုန်းခန့်နဲ့ ရွေ့လျားခဲ့ပါတယ်။
95W – 31 May 2012 0000Z Location: 11.3 129.4 Winds: 20 knots Central Pressure: 1007 hPa
တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ဂူအမ်ကျွန်းတောင်ဘက် မိုင် ၅၈၀ လောက်မှာ . . . → Read More: ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်းမှ မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် အခြေအနေများ